Articles tagged 'black opal face of zimbabwe'
Organisers spoil Virgo concert 20 September 2016 HARARE - Jamaican reggae star Romain Virgo saved the day following poor organisation by promoters of the Black Opal Face of Zimbabwe (Bofoz) 2016 concert that took place at the Glamis Arena in Harare last Saturday. Chipaz Promotions and Black Opal put together an amorphous concert that left a ...
Romain Virgo to rock Black Opal event 16 September 2016 HARARE - Jamaican music star Romain Virgo will add lustre to the Black Opal Face of Zimbabwe (Bofoz) finals set for the Glamis Arena in Harare tomorrow. The Cry for Tears singer, who will be making a maiden performance in Africa, will share the stage with local stars Soul Jah Love, Freeman, Ja...
Black Opal restructures pageant 22 December 2015 HARARE - Black Opal Face of Zimbabwe (Bofoz) has abolished first and second runner-up places in the wake of the recent conviction of second princess Mercy Kamanura for stealing a jumpsuit at Edgars. Kamanura ,24, was sentenced on Friday and was given the option of either paying an $80 fine or ...
Model pleads not guilty to shoplifting 25 September 2015 HARARE - Black Opal Face of Zimbabwe (Bofoz) second princess Mercy Kamanura yesterday stunned the court when she claimed that a $40 jumpsuit she is accused of stealing from Edgars Stores magically appeared in her handbag. Kamanura, 24, was represented by Lovemore Mataruse. She argued that the ...
Black Opal speaks on 'thieving second princess' 9 September 2015 HARARE - Black Opal Face of Zimbabwe organisers say second princess Mercy Kamanura, who has been taken to court for allegedly stealing a jumpsuit worth $40 from a local retail shop, should be deemed innocent until proven guilty. The 24-year-old entrepreneur appeared in court last week accused ...
Mafume lands Black Opal title 28 July 2015 HARARE - Twenty-two-year-old Cynthia Mafume bagged the Black Opal Face of Zimbabwe (Bofoz) title at a glamorous event held on Saturday night at the Harare International Conference Centre (HICC). The University of Zimbabwe pharmacy student beat 14 other contestants who were also vying to be the...